isifinyezo : UoA
Wasekelwa : 1874
Ungakhohlwa discuss The University of Adelaide
The University of Adelaide kuyinto esezingeni lomhlaba tertiary education kanye nocwaningo isikhungo ukusebenzela ukufeza izinga okusezingeni eliphezulu nokufunda abahlukene, nakho ukufundisa nokucwaninga.
The University of Adelaide okugxile:
ngithola ulwazi olusha
Ekulungiseleleni abaholi elifundile kusasa abangamalungu ezimele, Ongqondongqondo zokudala nombono international.
The University of Adelaide udonsa amandla ezintweni zalo owasungula njengoba uyazigcwalisa ucwaningo kanye nokufundisa sinamaphupho zakusasa.
Inyuvesi yisikhungo international ukuthi distinctively kuhlanganisa ekahle nyuvesi ucwaningo, lapho bonke ababekhona bajabula kakhulu, umdlandla nogqozi of search for ulwazi olusha ingenye lapho bonke abafundi iqhaza; njengoba umphakathi ukukhanyiselwa futhi ibayeke lapho abafundi bakwazi ungathola ukusekelwa, Kungakhathaliseki ukuthi siyini isizinda sabo noma izimo; futhi libe yindawo lapho Kaurna abantu, abagcina original bezwe on ngalo esewonke manje aphumule, beqashelwa futhi amasiko abo ehlonishwa.
The University of Adelaide izici zayo
Umzimba umfundi ububanzi lentsandvo yelinyenti
Izisebenzi abanohlonze international
Umoya inkululeko ukuba aphenye amasimu amasha
Umuzwa ezibalulekile emphakathini
Umgomo ukuze alungiselele abaholi abafundile.
The University of Adelaide uzibophezela a ndlela zayo recaptures irhuluphelo nyuvesi ucwaningo, futhi uhlose i nabasebenzi nasemhlabeni wonke-egxile kanye ukubekezela isithwathwa, lesichubekako umfundi mix, okuyinto kuyobalungiselela abafundi sokuba yisakhamuzi global kuleli zwe eliya borderless. Kuyoba eyunivesithi weqiniso ezimpandeni zayo zomlando, nokho inkanuko izibophezele yendima yayo ekuqhubeleni ikhiqiza abaphothule yakhelwe ukudlala izingxenye okuholela Asian Century.
Ukufunda nokufundisa encompasses neluhla lolubanti lwetinsita degrees undergraduate kanye postgraduate wanikela eNyuvesi.
AbaFundi ebekelwa eliyingqayizivele futhi ephelele imfundo nakho yezifundiswa izichasiso ziyahambisana imiphumela career. degrees Yethu ehambisana nezidingo nokushintsha abaqashi kanye nezidingo embonini kanye nomphakathi.
Ezombusazwe & Studies International
School of Civil, Environmental & Imayini Ubunginiyela
School of Agriculture, Ukudla & Wine
The University of Adelaide was established on 6 Novemba 1874 after a £20,000 donation by grazier and copper miner Walter Watson Hughes, along with support and donations from Thomas Elder.
The great hall of the University, Bonython Hall, lakhiwa 1936 following a donation from the owner of The Advertiser newspaper, Sir John Langdon Bonython, who left £40,000 for a Great Hall for the University.
Uyafuna discuss The University of Adelaide ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Izithombe: The University of Adelaide Facebook ezisemthethweni